ကိုဗစ်ကာလမှာ ပြည်သူတွေကို ထောက်ပံ့မယ့် ဒေါ်လာတသန်းကျော်ကို ဖြတ်စားမှုဖြင့် အင်ဒိုဝန်ကြီးကို ဖမ်းဆီး - Zet Star
ကိုဗစ်ကာလမှာ ပြည်သူတွေကို ထောက်ပံ့မယ့် ဒေါ်လာတသန်းကျော်ကို ဖြတ်စားမှုဖြင့် အင်ဒိုဝန်ကြီးကို ဖမ်းဆီး
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ပြည်သူတွေကို စားနပ်ရိက္ခာထောက်ပံ့ပေးမယ့် ရန်ပုံငွေတွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား လူမှုရေးဝန်ကြီး ဂျူလီယာရီဘာတူဘာရာကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားပြည်သူတွေအတွက် အစိုးရက စားနပ်ရိက္ခာနဲ့ နိုင်ငံစီးပွားရေး ပြန်တည်ငြိမ်ဖို့အတွက် နိုင်ငံတော်ရန်ပုံငွေတွေကို ထောက်ပံ့ပေးနေရာမှာ အင်ဒိုနီးရှားလူမှုရေးဝန်ကြီးက ရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ ၁. ၂ သန်းကို ဖြတ်စားခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေး အေဂျင်စီအရာရှိတွေက ဒီဇင်ဘာ (၅) ရက်နေ့မှာ ဘာတူဘာရာရဲ့ နေအိမ်ကို ဝင်ရောက်စီးနင်းပြီး ဒီဇင်ဘာ (၆) ရက်နေ့မှာပဲ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင် ရုံးချုပ်ကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင် စစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုလို သမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုရဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ထဲက ဝန်ကြီးတွေကို လာဘ်စားမှုနဲ့ ဖမ်းဆီးခဲ့တာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်ကလည်း ဝန်ကြီးတစ်ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပါသေးတယ်။
“ဒါပြည်သူတွေရဲ့ ပိုက်ဆံတွေပါ။ ကိုဗစ်ဘေးဒဏ်သင့်ဒေသတွေမှာ အားချင်းလိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေပေးဖို့နဲ့ နိုင်ငံစီးပွားရေး ပြန်လည် ထူထောင်ဖို့အတွက် သုံးရမယ့်ငွေတွေပါ။ ဒါကို အကျင့်ပျက်ခြစားတဲ့ ဘယ်အရာရှိဘက်ကမှ ရပ်တည်ကာကွယ်ပေးသွားမှာ မဟုတ်ဘူး။” လို့ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဝီဒိုဒိုက ရာဇသံပေး ပြောကြားသွားပါတယ်။
ဘာတူဘာရာဟာ အစားအစာထောက်ပံ့ရေး စီမံကိန်းတစ်ခုက ထောက်ပံ့ငွေစာအိတ် တစ်အိတ်ချင်းဆီကနေ ရူပီး ၁၀၀၀၀ (၀.၇၁ ဒေါ်လာ) ဖြတ်စားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီစီမံကိန်းမှာ ဦးစီးတဲ့ ကန်ထရိုက်တာ နှစ်ဦးဆီကနေ ရယူခဲ့တာလို့ စွပ်စွဲခံထားရပါတယ်။
ဒီအမှုကို စစ်ဆေးလို့ ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ရင်တော့ ဘာတူဘာရာဟာ ထောင်ဒဏ်အနှစ် (၂၀) ကျခံပြီး ဒဏ်ငွေ ရူပီးတစ်ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၇၀၀၀၀) ပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
← ယနေ့ ရန်ကုန်မြို့လယ် ကန်တော်ကြီးပန်းခြံအနေအထား (ကိုဗစ် ပြီးသွားကြပြီလား?)
မြန်မာနဲ့ ရွှေလီဆန်ကုန်သည်တွေဆီက သန်းတသောင်းကျော်လိမ်သွားတဲ့ “လော်ကြံဖန်” →